ရန်ကုန်သားတွေရဲ့ Stay Home ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ (ဒါတွေကတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ) – Myanmar
October 25, 2020 admin Funny 0
စပေ ..တွေရမယ်.. စပေ ရွှေယူမလားရွှေ ငွေယူမလားငွေ (စပယ်ပန်းသည်ရဲ့အော်သံက လှပနေတဲ့အိမ်မက်ကလေးကို အာရုံဦးမှာ လှုတ်နိုးလိုက်ပါပြီ ဟာ အေးလိုက်တာကွာ အဲယားကွန်းက စောင်လေးခြုံပြီးပြန်ကွေးလိုက်အုံးမှ) ပဲ 6:15Am
ပေး….ပြုပ်….နံပြား … ၊ ပေး…ပြုပ်.နံပြား .. (မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော်တော်လေးကိုစူးရှတဲ့အသံ မဆွေ မေဆွိနဲ့တောင်တူသလိုဘဲ) သူဟာကျွန်တော်ရဲ့နှိုးစက်ပါ ။ 6:45Am
အမှိုက်..အမှိုက်ပြစ်မလား .. အမှိုက် အမှိုက်..အမှိုက်ပြစ်မလား .. အမှိုက် (အကြိမ်ရေအများကြီး အော်ထားမိသည့်အတွက် အသံဝင်နေပြီး မြေညီထပ်မှ အထပ်အားလုံးကြားရန် အားကောင်းမောင်းသန် အသံနက်ကြီးဖြင့်အော်သံ) 7:30Am
ကေ…ညှင်း…..ကျန်….ပေါင်း…၊ ငချိတ်ပေါင်း..အိအိလေး .. ကေ…ညှင်း…ကျန်….ပေါင်း.. (အော်…အန်တီရယ် အောင်လိုက်တဲ့အသံ ညာသံကို အပြည့်ပဲ အဖြတ်အတောက်ကောင်းလိုက်တာ The voice မှာဆို လေးယောက်လုံးလှည့်ကြည့်မှာပါ) 8:30Am
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တိုင် ရာရောက် လာရောက်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ။ Non Stop … (ဒီ Hand speaker က recording မဆိုးဘူးပဲ အသံနေအသံထားက အလူခံတွေမှာ အော်ခဲ့ဘူးတဲ့အသံမျိုးနဲ့ အသံဖမ်းထားတာပဲ … ကန်စွန်းရွက်လေးကြော်စားမယ်လို့ ထွက်ကြည့်တာ စပီကာလှည်းက တွန်းပြေးပြေးသွားပါပြီ) 8:45Am
ငါးမြင်းရမယ်၊ ငါးကြင်းရမယ်၊ ပုဇွန်တွေပါတယ်၊ ပြည်ကြီးငါးတွေရမယ် (သူလည်း လှည်းနဲ့ ဟန်းစပီကာကြီး နဲ့ပါလား)8:50Am
မန်းမြို့တော် …. ပေါက်စီ … ပေါက်စီ ၊အသားပေါင်း၊ မန်းမြို့တော် …. ပေါက်စီ … ပေါက်စီ ၊အသားပေါင်း၊ မန်းမြို့တော် …. ပေါက်စီ … ပေါက်စီ ၊အသားပေါင်း (ကားလေးနဲ့ဟ အမိုးပေါ်မှာ စပီကာကိုကြိုးနဲ့ချည်ထားတယ် ၊ညဘက် လမ်းဘေးရပ်ထားရင် အဲ့စပီကာကြီး အခိုးခံရတော့မှာပဲ လို့ ပူပန်မိလိုက်တယ်) 9:00 Am
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ .. သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောကြက်တစ်ကောင်ကို ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊၄၀၀၀ကျပ်၊၅၀၀၀ ကျပ်နှင့်ရောင်းချပေးနေပါသညိ ။ ဗမာကြက်များလည်းပါပါသည်။ 9:20Am
555 သောက်ရေသန့် …. ရေသန့်ရမယ် ရေသန့် …555 သောက်ရေသန့် ရေသန့်ရမယ်ရေသန့် 555 သောက်ရေသန့်..9:40Am
ဝါးလုံးရမယ် Gas ဝါးလုံး…ထည့်ကြအုံးမလား ထောပတ် Gas ဘိန်းမုန့် အုန်းစိမ်းရည် ပူပူလေး… (ဟာ…လန့်လိုက်တာ ဘာတွေလည်း ထကြည့်ပါအုံးဟ …အစ်ကိုကြီး ဈေးသည်တွေအော်နေတာပါ ။ တစ်ယောက်က ဝါးလုံးရောင်းတဲ့အသည်။ တစ်ယောက်က Gas ထည့်မလား Gas . ထောပတ် ဘိန်းမုန့် ပူပူလေး ရယ် အုန်စိမ်းရည် ရယ် ….ဝူး …) 10:30Am
ဒုန်း …ဒုန်း … ဒုန်း … (တံခါးခေါ်က်သံ ဟ Mask လေးကို ကမှန်းက ကတန်းတပ်ပြီ သွားထကြည့်အုံး မှပဲ … Panda လေးဟ ပန်းရောင်လေးနဲ့ Delivery တဲ့ ဟာ ဘာမှ မမှာထားပါဘူး ဆိုတော့ အခန်းNo, က …ဘလာ ဘလာ 23456 မှားနေတယ် ဟိုဘက်အခန်းပါ …စော်တီးတဲ့ ) 11:36Am
ရွှင်လန်း သောက်ရေသန့် … ရွှင်လန်း သောက်ရေသန့်.. ရွှင်လန်း သောက်ရေသန့် တို့ပူးသုပ်၊ ကြာဇံသုပ်၊ ပဲပြားသုပ်၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ သင်္ဘောသီးသုပ်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ် ၊အစုံသုပ် ….. (အော်ရပါပြီဟာ မရပ်မနားအော်နေရလား ဟန်းစပီကာ ရဲ့ ဘက်ထရီကက တော်တော်အားပြည့်တယ်) 1:30Pm
မုန့်လက်ဆောင်း ၊ ရွှေရင်အေး ..၊မုန့်ကြာစိ သာကူပူပူလေး…. မဆိုးဘူးဟ ဒီhand speaker က နည်းနည်းတိုးပြီးအော်တယ် ဟ 1:35Pm
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ ..သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တိုင် ရာရောက် လာရောက်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ ခင်ဗျာ လူကြီးမင်းတို့ အသင့်စားသုံးနိုင်ရန် ငါးနီတူးခြောက်ကြော် ၊ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ဆပ်ပြာအဆီဗူးလည်းပါပါတယ် ခင်ဗျာ …. Non Stop …. 1:50 Pm
21 ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီလာပါပြီ။ ထီတစ်စောင်ကို 1000 ကျပ်။ (ထပ်ခါထပ်ခါ Hand speaker) 3:50PM
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ .. ကိုဖိုးဇော်တို့ မိသားစုကလည်း အလှူတော်ငွေ ၅၀၀၀. ကျပ်ကို လှူဒါန်းသွားပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ခင်ဗျ။ ပေး၍ မကုန် လှူ၍ မခန်း ပဒုမ်မ္မာ ရွှေကြာပန်းလို ပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ။ ကိုဖိုးဇော်တို့ မိသားစုတွေလည်း သိန်း ၁၅၀၀၀. ထီဆုကြီးများ ပေါက်၍ အလှူကြီး အတန်းကြီးများလည်း ပေးလှူ နိုင်ကြပါစေ။ မရှိလို့ မလှူ ၊ မလှူလို့ မရှိ ၊မဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်တော်များ ဤနေရာ ၊ဤဌာနကနေပြီးတော့ နိဗ္ဗာန် ကို အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် . ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲလို့ ညာဘက်ကလည်း တစ်လှည့် ဝင်နိုင်ကြပါစေ… အိပ်စိတန် ( က္ကိုစ္ဆိတံ ) ပတ် စိတန် တုံချန် ဂလုံဂလွမ်.. (ကြုံးပီဗျာ အိမ်ဘက်ကို ကြည့်ပြီး စပီကာကြီးနဲ့ နိဗ္ဗန်ကိုအရောက်ပို့ပါတယ်) ။3:55Pm
ကြက်သား ရမယ် ကြက်သား တစ်ကောင်လုံးမှ ၅၀၀၀ ပါ ကြက်ဥ ၁၀ လုံးတစ်ကဒ်ကို ၁၂၀၀ ဥကြီးကြီးတွေ လာရောက်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ (ကားလေးက အသစ်ကလေးဟ 1R/ လေးနဲ့ စပီကာလေးကလည်း အသစိကလေးနဲ့)3:59Pm
အဲယားကွန်း အပြတ်ဝယ်တယ်၊ ကွန်ပြူတာ လပ်ပတော့ အဟောင်းဝယ်တယ် ၊ဘက်ထရီအိုး ဝယ်တယ် … ( အနဲက အသံတော်တော်ကောင်းတယ် ဒါရင်ဘတ်ထဲကနေ လာတဲ့အသံနဲ့ recording လုပ်ထားတာ လည်ချောင်းထဲက အသံမဟုတ်ဘူး ) 4:00Pm
ဝုန်း… ဂလုံး …ဒုန်း…ဒုန်း ကြွီ …ကျလိလိ… ဗြိ… (ဟာ… လန့်လိုက်တာ ပြုတင်းပေါက်က Sunshade ပေါ်ကိုဘာတွေကြလာတာလည်း ဟ …ဆိုပြီးအထွက် အပြင်ဘက် ပြုတင်းပေါက်တဲ့တဲ့မှာငှက်ပျောသီး အခိုင်ကြီးက ကြိုးတန်းလန်း နဲ့အော်ငှက်ကျော်သီးသည်က အသံတိတ် အပေါ်ထပ်ကို ရောင်းပြီးကြိုးနဲ့ဆွဲတင်နေတာကိုး …ဝူး …. လန့်ထှာကွာ ..) 4:10Pm
ကောင်းသန့် ရွှေရင်အေး ..၊မုန့်လက်ဆောင်း လာပါပြီ…ကောင်းသန့် ရွှေရင်အေး ..၊မုန့်လက်ဆောင်း လာပါပြီ…ကောင်းသန့် ရွှေရင်အေး ..၊မုန့်လက်ဆောင်း လာပါပြီ။ (ကောင်းလှရီလား… hand speaker နစ်လုံးထိုးဟ များသွားပြီ ဒါနဲ့ဆို လမ်းထဲကိုလာတာ သုံးကြိမ်ရှိသွားပြီ။ 4:40Pm
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂါလာပါ .. သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တိုင် ရာရောက် လာရောက်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ။ Non Stop …. ( ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ပါ) 4:50Pm
Take Give သောက်ရေသန့် … Take Give သောက်ရေသန့် …Take Give သောက်ရေသန့် … Take Give သောက်ရေသန့် …. Take Give သောက်ရေသန့် Take Give သောက်ရေသန့် 5:10Pm
21 ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီလာပါပြီ။ ထီတစ်စောင်ကို 1000 ကျပ်။ (တွန်းပြေးပြေးသွားတယ် ထပ်ခါထပ်ခါ Hand speaker) 5:50PM
ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ.. ယခုအချိန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအတွင်း…
သကြား မုန့်ဖတ်ထုပ် ပူပူလေး ….မုန့်ဖက်ထုပ်… အီကြာကွေး…. အီကြာကွေး ရှမ်းတိုဟူးကြော်တွေရမယ် စာရှည်သွားပြီ။ တော်သေးပြီ
(khin khin pyone)
ထိုင်းမှာ ကံကြမ္မာပြောင်းလဲစေဖို့အတွက် လက္ခဏာလမ်းကြောင်းတွေကို ပြောင်းလဲပေးနေ